ကွန်ပျူတာကိုပေါ့ပါးသွားစေမည့် System Ninja
System Ninja requires the Microsoft .NET Framework 3.5 installed in order to use. System Ninja supports Windows XP, Windows Vista and Windows 7. Earlier version may work but are not officially supported, please don’t file bug reports if you are running an ancient operating system.
စင်္ကာပူမှာ နေတဲ့သူတွေကို လေးလည်းလေးစားတယ်။ မနာလိုလည်းဖြစ်တယ် :D လေးစားတာကတော့ အခုလို စာပေဟောပြောပွဲတွေကို စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်နိုင်လို့ပဲ။ မနာလိုတာကတော့ ဒီဘက်မှာ အဲလိုစာပေဟောပြောပွဲတွေ နည်းနေသေးတယ်။ ဝေးတာလည်းပါတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆိုရင်တော့ ဒီထက်ပိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။
အရင်တစ်ခေါက်က ဆရာညိုထွန်းလူဆရာချစ်ဦးညို၊ ဆရာနေဝင်းမြင့်၊ ဆရာမဂျူးတို့ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေကို အခုထိ ထပ်ခါတလဲလဲ နားထောင်မိနေတုန်းပဲ။ တတိယအကြိမ်ဟောပြောမယ့် စာရေးဆရာတွေကလည်း ကျွန်တော့်အကြိုက်တွေချည်းပဲ။ အရင်အခေါက်တွေတုန်းကလိုပဲ ဟောပြောချက် အသံဖိုင်လေးတွေကိုပဲ စောင့်မျှော်နေရဦးမည်ပေါ့ဗျာ။
Event: A Global Day Of Action
Demonstration for 34 Karen and Arakanese freedom fighters
UNHCR will be urged to grant 34 Karen and Arakanese freedom fighters refugee status, Indian Government to release them immediately and commit not to deport them back to Burma. Please come and join the demonstration to raise voices for their freedom.
11 - 02 - 2011 [Friday]
High Commission of India, India House, Aldwych, London, WC2B 4NA
Holborn, Covent Garden, Temple and Charing Cross.
This action is organized by Karen National Union - UK, Arakan Students’ and Youths’ Congress (AASYC) and supported by the Burma Campaign UK.
Event: Union Day Demonstration Calling For National Reconciliation in Burma
Burma Democratic Concern (BDC) will hold the demonstration calling for National Reconciliation in Burma and you are cordially invited to join with us and looking forward to see you all. Thank you very much.
In front of the Burmese Embassy in London, UK.
11 February, Friday 2011 From 13:00 - 14:00 PM
Event: Union Day Demonstration Calling For Nationa...